Vary Nendasina Sy Atody, Endriky Ny Andro Fanolorana Fisaorana Ho An’ny Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Vary Nendasina Sy Atody, Endriky Ny Andro Fanolorana Fisaorana Ho An'ny Shinoa
Voadika ny 26 Novambra 2015 3:00 GMT
Sariitatra vao navoakan'i @badiucai momba ny Andro Fanolorana Fisaorana ao Shina.
Vitsy ny olona no mahafantatra fa tahàka ny any Etazonia sy Kanadà, mba manana ny Andro Fanolorana Fisaorana koa i Shina — na dia tsy ofisialy aza. Tena izany tokoa, taona vitsy lasa izay no namoronan'ireo mpisera amin'ny aterineto io fety io toy ny tsikera mahatsikaiky natao hanehona hevitra tamin'ny fahafatesan'i Mao Anying zokilahin'ny filoha taloha tao Shina, nandrtra ny ady tamin'i Korea (1950-1953).
Ny vary nendasina sy ny atody no sakafo nentim-paharazana. Nahoana? Satria matin'ny fanafihana an'habakabaka i Mao Anying nandritry ny ady tamin'i Korea raha iny izy namàna vary ho an'ny sakafo maraina farany iny, araka ny literatiora ara-tantara momba an'i Mao Anying sy ny ady tamin'i Korea, nosoratan'i Wu Lijin, miaramila tranainy tao amin'ny Tafi-Panafahan'ny Vahoaka. Misy mino fa hoe ny fofon'ny vary nendasina niaraka tamin'ny paoma may no nisintona ny sain'ny tafika an'habakabaka fahavalo ka nitondra ho amin'ilay fandarohana baomba.
Ho an'ireo mankalàza ny Andro Shinoa ho Fanolorana Fisaorana rehefa 25 Novambra, mino ry zareo fa raha tafavoaka velona tamin'ilay ady i Mao Anying, mety lasa tao an'i Korea Avaratra i Shina. Noho izany, ampiasain'izy ireo ilay fotoana mba hanehoany fisaorana ny tafika an'habakabaka “fahavalo”.
Tamin'ity taoana ity, marobe ny Shinoa mpampiasa aterinto no nikisaka ho ao amin'ny Twitter — izay ara-teknika dia tsy azo idirana ao Shina, saingy tsy voasivana raha toa ianao ka afaka mandingana ireo bàhana ofisialy atao amin'ilay tolotra — mba hankalaza ny Andro Shinoa ho Fanolorana Fisaorana. Nandefa hafatra sy sarinà vary nendasina ho an'io andro io ireo mpandray anjara tamin'ny fampiasàna tenifototra #蛋炒饭节 (Andron'ny Vary misy Atody) na #中国感恩节 (Fanolorana Fisaorana amin'ny fomba Shinoa).
@badiucai, mpanao sariitatra ao amin'ny Twitter, dia nandefa sariitatra iray fanao ho an'ny fetibe (jereo ery an-tampony ny sary). @jiajia, mpanao gazety, nandefa ny sakafo antoandrony narahany fampahatsiahivana hoe:
友情提醒：今天是蛋炒饭节，标准配置是腊肠蛋炒饭配苹果。吃前拍照上传哦！是中国人就转！标签 #中国感恩节 #chinathanksgiving 。 pic.twitter.com/eg4r9MCGsq
— 賈葭 (@jajia) November 25, 2015
Fampahatsiahivana am-pirahalahiana: Andron'ny Vary misy Atody Anio. Ny fenitra hajaina dia vary nendasina asiana atody sy nofon-kena kisoa, ary paoma ho toy ny sakafo fanampiny. Ankafizo ny sakafonao ary tsarovy ny mampakatra ny sary. Ry vahoaka Shinoa, iangaviana ianao hamerina hibitsika azy ity. #ChineseThanksgiving
Fito taona nifanesy i @arthur369 no nanamarika ilay fety tamin'ny fihinànana vary nedasina :
— 西乔 (@arthur369) November 25, 2015
Andron'ny Vary misy Atody Anio. Isaorana ny lanitra fa tsy lasa t an'i Korea Avaratra isika. Androany koa no fitsingerenan'ny nahaterahako. Nandritry ny fito taona, ity [vary nendasina ity] no sakafo antoandroko.
Bill Kwong cartoon from Weibo.
Nanerana ny Weibo, ilay toy ny Twitter ao Shina, marobe ireo mpisera amin'ny aterineto no nandefa sariitatra avy amin'ny fetiben'ny asa kanton'i Bill Kwong — na dia nalaky voafafa aza ireny lahatsoratra ireny, noho ilay sehatra tena faran'izay iharan'ny sivana mavesatra.
Ireto ambany ireto ny fantina lahatsoratra avy ao amin'ny Weibo:
Dimy amby enimpolo taona lasa izay, lovia iray nisy vary voaendy sy atody no nanova ny tantaran'i Shina. Raha tsy nisy an'io lovia io dia mety ho lasa Korea Avaratra isika (na dia efa lasa mitovy ihany aza ny roa tonta). Isaorana ny Air Force an-dry zareo Amerikàna imperialista, isaorana ny vary voaendy misy atody.
Vao avy nikarakara vary nendasina sy atody mihitsy. Tonga avy any ny raiko ary dia nifampizaràko taminy ny sakafo. Faly ve izy. Tiako ny hilaza taminy ny antony nikarakarako vary voaendy androany, saingy noho izy mpiankohoka amin'i Mao, toy ny fiankohofan'ny tanora amin'izao fotona amin'i Jay Chou [mpihira pop], dia nijanona tsy nilaza ny tantara aho.
Andro Shinoa ho Fanolorana Fisaorana Anio. Antsoina ihany koa hoe Andron'ny Vary misy Atody Anio , na Andro Fisaorana ny Daroka Baomba. Noho ny fahasahian'ny Air Force Amerikana. Nanova izay hiafaràn'ny firenena ianareo.
Saingy tsy ny rehetra no nankasitraka ilay hatsikana mainty tamin'io andro io. Naneho hevitra ilay mpanoratra mpanohitra @mozhixu :
— 莫之许 (@mozhixu) November 25, 2015
Nanatsara ny fari-piainan'ny vahoaka sy namaha ny olan'ny fahantrana ny fanavaozana ny tsena nentin'ny Antoko Kaoministra Shinoa sy ny fidirana tamin'ny toekarena manerantany. Ny olona rehetra raha hitarina no mankafy [fahalalahana amin'ny] ara-kolontsaina sy toekarena. Io no psikolojia ao ambadiky ny fankalazàna ny Andron'ny Vary misy Atody. Kanefa, manana zo hihinana ianao, fa tsy zo sivily. Kisoa ny kisoa, na dia feno fankasitrahana azy izy ireo [noho ny satany]. Toa mbola hanampy ny fitondràna jadona haharitra kokoa ny fampiroboroboana ny tseana amin'izao fotoana izao. Tsy misy zavatra tokony hankalazaintsika.
Ho an'ny olona miaina any ivelan'i Shina, farafaharatsiny, mampiala voly ilay tenifototra:
@crehage really? Is that true? but not really matter, now I have an appetite for #蛋炒饭 🍚🍚🍚🍚🍚
— Pia (@Lu_Peiya) November 25, 2015
@crehage Marina hoe? Tena marina ve izany? saingy tsy tena olana, ankehitriny aho manana fahazotoan-komana ny #蛋炒饭 🍚🍚🍚🍚🍚
Myanmar (Birmania) 15 ora izay